DEG DEG:- Dagaal la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan oo haatan ka socda magaalada Gaalkacyo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Dagaal la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan oo haatan ka socda magaalada Gaalkacyo
Wararka haatan naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in galbeedka magaaladaasi uu ka soconaayo dagaal aad u culus oo u dhaxeeya ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland.
Dagaalkaan oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa noqonaya midkii labaad uu labadaasi dhinac halkaasi ku dhexmaro tan iyo markii madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug ay heshiis hordhac ah ku gaareen magaalada Abu Dhabi ee dalka Isku-taga Imaaraadka Carabta.
Ilaa iyo haatan lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi oo haatan si xoogan uga soconaayo magaalada Gaalkacyo, waxaana magaaladaasi haatan laga maqalayaa madaafiic xoogan iyo rasaas badan oo ay labada dhinac isku adeegsanayaan.
Dhinaca kale, waxgaradka, siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka gobolka Mudug ayaa maalmihii ugu dambeysay baaqyo kala duwan kasoo saaray colaadaha u dhaxeeya ciidamada Galmudug iyo Puntland.
Dhamaan dadkaasi ayaa ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo xiisada dagaal, islamarkaana la dhaqan geliyo heshiiskii hordhaca ahaa oo ay labada madaxweyne ee Puntland iyo Galmudug ay ku kala saxiixdeen magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta.
Xaaladda magaalada Gaalkacyo ayaa maanta ah mid aad u kacsan, waxaana haatan magaalada laga maqalayaa hubka culus ee daran-dooriga u dhaca iyo rasaas badan oo ay labada dhinac isku adeegsanayaan.
Ma jirto wax hadal ah oo ay saraakiisha ciidamada Puntland iyo Galmudug ay kasoo saareen dagaalka haatan ka soconaaya galbeedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Wixii kusoo kordha warkaan dib kala soco Insha Allaah
Stockholm mosque desecrated by swastikas, anti-Muslim slogans
US election: No rest in final campaign hours for Hillary Clinton, Donald Trump